मासिक डेढ लाखको जागिर छोडेर माछापालन
विराटनगर । मोरङको विराटनगर–१७ का एहसान शेखले व्यवसायिक माछापालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका शेखले पछिल्लो २ बर्षमा व्यावसायिक माछापालनबाट राम्रो सफलता हात पारेका छन् । कतारमा १ बर्षभन्दा बढी समयसम्म मेकानिकल ईन्जिनियरको काम गरेर फर्किएका एहशान शेखले विराटनगर–१८ मा झण्डै २ बिघा क्षेत्रफलमा माछापालन गर्दै आएका छन् । कतारमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ मासिक कमाई हुने रोजगारी छोडेर स्वदेशमा फर्किएका शेखले विगत २ बर्षदेखि व्यावसायिक माछापालन गर्दै आएका हुन् । स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यका साथ २ बर्षपहिले थालेको माछापालन हाल उनको पारिवारिक आयआर्जनको दरिलो माध्यम बनेको छ । माछापालन व्यावसायबाट उनले बार्षिक ५ देखि ७ लाख रुँपैया आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
वि.सं. २०७३ सालमा ‘न्यू नेपाल कृषि केन्द्र’ नामक संस्था दर्ता गरि २०७५ सालदेखि एहशानले व्यवसायिक माछापालन थालेका हुन । यसअघि उनका बुबाले सो व्यावसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । व्यावसायिक माछापालनका लागी एहशानले ५ बिघा क्षेत्रफलमध्ये २ बिघामा ह्याचरी र लाईभ फिस ह्याण्डलिङ प्लाण्टसहित ९ वटा पोखरी निमार्ण गरेका छन् । हाल उनको पोखरीमा मागुर, पङ्गास र कमनकार्प लगायत विभिन्न प्रजातिका माछाहरु रहेका छन् । माछाप्रति ग्राहकको आर्कषण र चाप पनि उत्तिकै रहेको एहशानको भनाई छ ।
एहशानले माछापालनका साथसाथै माछाको भूरा पनि उत्पादन गर्दै आएका छन् । बार्षिक २ लाख रुँपैया बराबरको माछाको भुरा मात्र उत्पादन हुने गरेको युवा व्यावसायी एहशान बताउँछन । एहशानले माछाको भूरा उत्पादन गर्न र व्यवसायिक रूपमा माछा बिक्री गर्न दुई छुट्टाछुट्टै पोखरी समेत तयार पारेका छन् । माछाको भूरा प्रशोधन गर्नका लागि कङक्रिटको छुट्टै पोखरी पनि निमार्ण गरिएको छ ।
८ दिन प्रशोधन गरेपछि माछाको भूरा बिक्रीको लागि तयार हुन्छ । एक लटमा ८० हजार भूरा उत्पादन हुने गरेको उनको भनाई छ । उनले उत्पादन गरेको भूरा माछा पुर्वमा झापादेखि पश्चिममा विरगञ्जसम्मका कृषि फर्महरुले खरिद गरेर लाने गरेका छन् । उत्पादित माछाको भूरा, साईज अनुसार न्युनतम ५ रुपैयाँदेखि ७ रूपैयाँ प्रतिगोटा सम्म बिक्री हुने गरेको छ ।
खर्च कटाएर बार्षिक ५ देखि ७ लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका एहशानले आफ्नो कृषि फर्ममा ३ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएका छन् ।
बुधबार, १९ कार्तिक, २०७७, दिउँसोको ०४:४१ बजे
My name’s Eric, and I just found your site – hamromat.com – while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty cool.
But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across hamromat.com, what usually happens?
If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=hamromat.com